Ukwandisa umswakama (inkambo yokucubungula izinqubo zePhytoceane)
Naphezu kokusetshenziswa kwama-moisturizers njalo, angizange ngizwe ngesikhumba esomile. Ukungazinaki kuqiniswe ukushisa, lapho umshini wokushisa umoya ehhovisi waqala ukusebenza njalo. Lesi simo sasiqhutshwe yizinyawo ezihamba phambili ngaphandle kwedolobha kuze kube yilapho kutholakala khona ilanga nomoya. Ngakho-ke, ukuze ngibuyele esikhunjeni senduduzo nokubukeka okungenakuqondakala, nganquma ukuthatha inkambo yezinqubo zokuphucula iPhytoceane.
Ngesikhathi sokubonisana, i-beautician yaqinisekisa ukuthi inkinga yokukhulelwa kwamanzi isikhumba ayidlulile kimi. Ngeshwa, le nkathazo ingenzeka nganoma yiluphi uhlobo lesikhumba nanoma yisiphi isikhathi. Ukuze ngithuthukise kakhulu isimo se-epidermis, nganikezwa ukuba ngiqhubeke nenqubo yokuhluma kwe-French brand Phytoceane. Ingxenye eyinhloko yazo zonke izimonyo zalezi zimonyo yi-extra algae ebomvu emndenini we-coral. Ukungafani kwesitshalo ukuthi igobolondo layo, elivikela isitshalo ekulahlekelweni kwamanzi, lisebenza ngendlela efanayo ne-epidermis yabantu. Futhi, ngenxa yalokho, ukukhishwa kwesitshalo kusiza ukugcina ukulinganisa amanzi emvelo kesikhumba isikhathi eside.
KUSUKELA ESIQINISWENI ESIKHULU
Okokuqala, ngosizo lobisi ne-tonic, konke okwenziwe kwenziwe kususwe ebusweni. Sabe sesibambezela - ukuhlanza okujulile kobuso kanye nesikhumba se-decollete nge-scrub esithambile ne-brush electronic. Lezi zinsuku zijikeleza ngokushesha, ukuze ngokulingana zisakaze izinhlayiya zesikhumba esikhwameni, zishukumise futhi zivuselele umsebenzi wamaseli.
Ngithanda ukugeza futhi ngingaboni ngempela ezinye izindlela zokuhlanza isikhumba, ngaphandle kwezinqubo zamanzi. Kodwa ukuhlanzwa kwePhytoceane kungenye indaba. Ukuzwela kokusondela kwamanzi akushiyi ekuqaleni kwesenzo. Lokhu kungenxa yezinhlayiya ezikhethekile zasolwandle, ukuthungwa okulula okukhanyayo futhi, impela, umculo, wengezwe ngomsindo wamagagasi, okuzwakala ngokuthula endlini.
Ukuphumula okujabulisayo nokunethezeka okugcwele. Kusobala ukuthi awukho umqondo wokuqina, owavela emva kokugeza ngamanzi "aphilayo" avela emthonjeni. Futhi isikhumba sibushelelezi, njengomntwana! Umphumela ofanayo awuzange unikezwe yinoma yiziphi izivunguvungu ezisetshenziswa ngaphambili.
Ukuhlunga imibala ne-shoulder kanye ne-lymphatic drainage elements eklanyelwe ukwandisa ithoni yesikhumba kanye ne-tone muscle, ukukhulula ukuvuvukala nokukhipha ubuthi, nokunciphisa ukucindezeleka nokulungisa isikhumba ngesicelo semaski. Yenziwa ngejelisi lokuhlunga, lapho, ngokuya ngezidingo zesikhumba, ukunyusa noma ukuqinisa ukugxila kuyongezwa. Le nhlanganisela ivumela isikhathi eside ukuhlehlisa umhlangano ngemibimbi yokuqala.
Iminwe ebucayi ihlobisa ubuso bomlomo vyleplivayut futhi. Kancane kancane ngiqala ukuzwa yonke iseli yesikhumba. Kubonakala sengathi bavuka ekulele isikhathi eside. Ngemuva kokusikhipha, i-gel isuswe nge-foam yokuhlanza. Uma ethinta ubuso bakhe, kubonakala sengathi ifu elimnandi elwandle lomswakama. Futhi iphunga elimnandi elimnandi leli remedy liqhubeka ligcizelela lokhu kufana.
Ukuphumuza okuphelele kanye nesimo esisha ngokuphelele sobuso, okungekho ukukhathala noma ukungezwani. Futhi ukukhanya kubonakala kuwo wonke umzimba.
Isigaba esiyinhloko senqubo siqala, lapho ukugcoba okusebenzayo kwezingxenye ezijulile ze-epidermis kwenzeka. Indima ebalulekile lapha idlalwe yi-mask ngezinga eliphezulu lokukhishwa kwe-red alga namanzi okuphuma kwamanzi olwandle. Lezi zakhi zigcwele i-calcium ne-magnesium, eqinisa izingqamuzana zamangqamuzana esikhumba, evuselela indlela engokwemvelo yokuqongelela nokulondoloza umswakama. I-mask isetshenziswa ebusweni nasentanyeni, futhi imibuthano yekotini isetshenziselwa ukuvikela indawo ezungeze amehlo. Emaminithini angu-15-20, ngenkathi i-mask ikhululeka, i-beautician yenza ukuhlunga kwe-lymph kwamanzi amaningi kanye nezimpande nge-moisturizer.
Iphunga elimnandi le-iodine ne-algae, kanye nomculo ovuthayo onomsindo womoya kanye ne-surf wenza umzwelo wokuthi konke okwenzeka kimi kuvela ogwini lolwandle ngaphansi kokukhala kwama-seagull, lapho sekuphelile ngemva kwesiphepho. Futhi njengoba amehlo emboza amabhola ekotini, akukho lutho olungaqeda lesi senzo. Ngenxa yalokho, ngaqala ukusola ukuthi i-teleportation engaqondakali emgogodini ... Kodwa-ke, yaqhuma ngokuphelele lapho isisindo esiqhwayo sisusiwe futhi amehlo ami avela ekhanda "eluhlaza" okuluhlaza okwesibhakabhaka kunama-socks, okwakubonakala sengathi i-mask igesi.
Ngaphakathi ngaphakathi kwe-mask efriziwe, wonke ama-creases nama-wrinkle amahle ayebhalwe phansi. Kodwa kwakungekho umkhondo oshiywe kubo esikhumbeni. Ithuluzi lenze njalo ukuze konke ukungalingani kubonakale kusula i-eraser! Umbala wesikhumba ujabulise ngokumangalisayo: Ngangibukeka njengodonsa wensimbi. Umehluko wukuthi ubuso bubukeka buthakathaka ngokuphelele futhi ngaphezu kokuphila!
Ekugcineni, isikhumba sisetshenziswa kulabo abakhethiwe, kuye ngokuthi hlobo luni lendlela. Bavikela emiphumeleni eyingozi yemvelo futhi balungiselela umuntu ukuba enze izimonyo.
Ulungele ukuhamba ngosuku olusha ngobuso obusha ngokuphelele kanye nenqwaba yemibono yokuhamba kolwandle olubonakalayo.
Ngiyajabula futhi ngiphumula. Ngesikhathi esifanayo, isikhumba sibushelelezi futhi siphelile. Futhi ubuso bubushelelezi futhi buphilile kangangokuba akukho nakanjani isifiso sokusebenzisa izimonyo.
Ukuphumelela kwalolu lwazi kubonakala ngokugcwele ekuseni olulandelayo, lapho emva kokulala ebusweni kwakungenayo imidwebo evamile emilenzeni. Futhi lesi siphumo sabamba isonto.
I-bonus emangalisayo futhi ngesikhathi esifanayo ibhonasi ewusizo kule nqubo ukusikhipha kwezandla ngesikhathi sokuphumula nge-mask ebusweni. Ngangijabule kabili, ngoba angilali ngesikhathi sezinqubo, futhi uma sekuyisikhathi sokuqamba amanga ngilinde imiphumela, ngiyahlupheka ngenxa yokungasebenzi. Bese-ulale phansi futhi ujabulele massage. Ngaphezu kwalokho, lokhu kunomphumela omuhle ekubukeni kwezandla nemizwelo.
Iphunga le-mask liseduze kakhulu nemvelo kangangokuthi ngezinye izikhathi lifana nomoya wolwandle olwandle ngemva kwesiphepho, lapho ama-shells kanye ne-algae aphonswa esihlabathini enza kancane kancane umsindo we-surf ... Futhi, nokho, yilo lephunga eliletha izinkumbulo zothando kakhulu.
I-Technique ye-massage yaseTibetan
Sula "isandla sokusiza" ezandleni zakho
Siqeda isisu esiswini emva kokubeletha: indlela edidiyelwe
Ukuguga nokwehlisa isikhumba sezandla
Ukuphulukisa izindawo zezinyosi ze-linden
Indlela yokususa izinwele emzimbeni ekhaya
Ukudla kwezingane ngesikhathi sokugula
Ukusetshenziswa kwamafutha omnyama we-pepper
I-makeup ye-Eye for Wabasaqalayo: ama-lifhakas amane awusizo
U-Ekaterina Andreeva uphakamise umdlalo "Nureyev" futhi uthumele ividiyo ehlazolayo
Izimbangela ze-asthma ye-bronchial
Kungani zonke izidlo zizobhujiswa
Ingabe ucansi emanzini luyingozi?
I-crochet ene-loop enezilophu ezixubile: isinyathelo ngesinyathelo
Isicelo kanye nezakhiwo ze-citronella amafutha abalulekile
Ukudla ngeqembu legazi
Ukwelashwa kwe-gastritis engavamile namayeza omuntu
Ungasusa kanjani u-acne ngesikhathi esifushane?
Mangaki ama-tatto ayenziwe ngu-Angelina Jolie?
Kungcono kanjani ukuhlela imisebenzi yasekhaya?